Dad Shacab Ah Oo Ku Dhintay Isbuurasho Ka Dhacdey Bannaanka Garoonka Diyaaradaha Ee Kabul – Borama News Network
Dad Shacab Ah Oo Ku Dhintay Isbuurasho Ka Dhacdey Bannaanka Garoonka Diyaaradaha Ee Kabul
Toddobo qof oo rayid ah ayaa ku dhintey isbuurasho ka dhacdey bannaanka garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyadoo ay si waliba isugu dayayaan iney ka cararaan la wareegista dalka Afghanistan ururka Taliba, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska.
Afhayeen u hadley wasaaradda difaaca, ayuu ku sheegay war ay soo saareen iney wajahayaan caqabado aadu xun, ha yeeshee ay sameynayaan wax waliba oo ay awoodaan, si ay u badbaadiyaan shacabka, una xakameeyaan amni darida jirta.
Wuxuu intaa raaciyey iney jiraan goobo ay wax ka dhaceen oo ku beegan bannaanka garoonka, iyadoo kumanaan reer Afghanistan ah ay isku dayayaan iney baxsadaan.
Dalal badan ayaa ku guul dareysteen iney caawimaad u fidiyaan muwaadiniintooda, iyo dadkii reer Afghanistan ee la shaqeynayey.
Illaa iyo afar kun iyo shan boqol oo ciidamo Mareykan ah, ayaa si kumeel gaar ah u maamulaya garoonka caalamiga ee Hamid Karzia, iyadoo ay jiraan sagaal boqol oo ciidana oo Ingiriisa oo Iyana ilaaliya garoonka, iyagoo qeyb ka ah dadaalada lagu sugayo amniga duulimaadyada wax daad gureynaya.
Dagaal yahanada Taliban ayaa joogga baraha laga soo galo garoonka, iyagoo xirey dad reer Afghanistan ee aan wadanin aqoonsiga, ee doonayay iney dhoofaan.
“Shaqo Kastoo La Qabto Waxay U Baahan Tahay In Loo Yeesho Aqoon Baban” Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta
“Qaxoontiga Dhanka Itoobiya Kasoo Galaya Oo Aad Usoo Badanaya…”Guddoomiyaha Hay’adda Qaxoontiga Iyo Barakacyaasha Somaliland
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaliyeed oo Loo Doortay Mudane Ka Tirsan Golaha Shacabka
Bnnstaff Bnnstaff March 15, 2022
Olole Dhiig Shubis Iyo Dhir Beeris Ah Oo Laga Bilaabay Magaalada Jigjiga
Bnnstaff Bnnstaff July 12, 2021